In ka badan 19 milyan oo qof oo Saaka u Dareeray Codbixinta Doorshada Kenya – Puntland Post
Posted on August 8, 2017 by Cabdiqani Boos
In ka badan 19 milyan oo qof oo Saaka u Dareeray Codbixinta Doorshada Kenya
Kenya-[Puntland Post] Guud ahaan dalka Kenya waxaa ka billowday codbixinta doorashada guud iyadoo ay dadka ku jiraan safaf dhaadheer. Meelaha qaar dadku waxay billabeen inay safka galaan 1-dii habeenimo inkastoo ay codbixinta si rasmi ah u billaabatay 6-dii arroornimo.
In ka badan 19 milyan oo qof ayaa u diwanagalsan codbixinta maanta.
Hadba sida uu u guuleysto hannaanka codeynta ee computer-da ee guddiga madaxabannaan ee doorashooyinka iyo xuduuddaha (IEBC) ayaa muhiim u ah in loo arko doorashadan in ay ku dhacday si xor iyo caddaalad ah.
Haddii hannaankan uu guuldaraysto sidii dhacday 2013, waxa codadka lagu tirin doonaa gacanta, taasina waxay wadanka u horkici doontaa si aan shaki ku jirin in qofka laga adkaado uu dood ka keeno natiijada.